Shirkadda Flynas ayaa ku dhawaaqday dib udhac ku yimid duulimaadyada tooska ah ee KSA iyo Seychelles
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jebinta Wararka Sucuudiga » Shirkadda Flynas ayaa ku dhawaaqday dib udhac ku yimid duulimaadyada tooska ah ee KSA iyo Seychelles
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Sucuudiga • Jabinta Wararka Seychelles • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Investments • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Wararka kala duwan
Duulimaadyada Seychelles Flynas
Waxaa lagu dhawaaqay 1-da Luulyo, 2021, bilowga duulimaadyada Flynas ee isku xira jasiiradaha Seychelles iyo Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa dib loo dhigay taariikh dambe.
Dib u dhaca wuxuu la xiriira awooda nooca cusub ee A320 Neo ee loo qoondeeyay halka loo socdo.
Flynas waxay xaqiijisay in mashruuc hada socda ay diyaarada ku helayso ETOPS cadeyn kadib taa oo howlgalka la bilaabi doono.
Seychelles waxay soo dhaweysay ku dhowaad 300 oo booqasho oo ka timid Sacuudi Carabiya tan iyo bishii Janaayo 2021 waxaana koror ballaaran la saadaalinayaa gobolka marka Flynas la caddeeyo inuu ka duulayo.
Macluumaadka ay u gudbiyeen wakiilada Flynas wakaaladda duulista rayidka ee Seychelles waxay muujineysaa in dib u dhigista duulimaadkooda tooska ah ee Jeddah ilaa Mahé ay la xiriirto awoodda diyaaradda cusub ee A320 Neo ee loo qoondeeyay halka loo socdo, taasoo saameyn ku yeelan doonta culeyskeeda iyo baaxadeeda. Shirkadda ayaa sidoo kale xaqiijisay in mashruuc hadda socda ay diyaaradda ku heleyso soo saarista ETOPS ka dib howlgalka la bilaabi doono.
Wasiirka Arimaha Dibada iyo Dalxiiska ee Seychelles, Mr. Sylvestre Radegonde, wuxuu cadeeyay halka ay ku wajahan tahay duulimaadyada cusub, oo ay ahayd inay shaqeeyaan sedex jeer usbuucii, in kasta oo uu dib u dhac ku yimid taarikhda bilowga.
Dib u dhaca ku yimid bilaabida duulimaadyada Flynas ee Seychelles waa dib udhac yar, oo aan ku kalsoonahay inay xalin doonaan. Qorshayaasheena suuqa wax saameyn ah kuma lahan waxaana rajeyneynaa inaan si dhaqsi leh ugu soo degno jasiiradeena. ”
Dhinaceeda, Xoghayaha Maamulaha ee imanaya Waaxda DalxiiskaMrs. Sherin Francis, ayaa faallo ka bixisay inkasta oo ay ka niyad jabtay in Flynas aysan ka soo degi doonin Seychelles bisha Luulyo sida markii hore loo qorsheeyey, halka ay u socoto ayaa rajeyneysa inay soo dhoweyso rakaabkeeda xilligan ay suurogal tahay.
“Waa wax laga xumaado in Flynas uusan imaan doonin Seychelles sida lagu xusay bishii Luulyo, laakiin tani nagama hor istaagi doonto inaan sii wadno howlaheena si aan Seychelles uga sii muuqan lahayn gobolka. Waxaan rajeyneynaa in xaalada si dhakhso leh loo xalin doono oo meesha loo socdo ay awoodi doonto inay soo dhaweyso martida ka imaaneysa Saudi Arabia iyo gobolka dhowaan, ”ayey tiri Mrs. Francis.
Meesha ay aadayaan waxay diiwaan geliyeen ku dhowaad 300 oo qof oo ka yimid Sacuudi Carabiya tan iyo bishii Janaayo 2021, koror aad u weyn ayaa la saadaalinayaa gobolka marka Flynas uu bilaabo inuu u duulo Seychelles. Diyaaradda Flynas A320 Neo waxay qaadi kartaa 174 rakaab ah.